Weligaa ma laga badiyay maktabadda Lugood aad? Malaha waxaa la waayay midig ka dib markii aad la casriyeeyay qalab macruufka. Waxaan kuu sheegi karaa in aadan ahayn oo keliya sida ugu badan oo inaga mid ah ayaa soo wajahay xaalad this. Just ah Google raadinta fudud ka dhigi lahaa waxaa si cad u sheegay in mid ka mid ma run ahaantii waa ogyahay sababta ama sida ay u dhacdo, laakiin waa hubaal waxaa jira dad badan oo ayaa laga badiyay dhan maktabadda Lugood. Qaar waxay yidhaahdaan in ay dhacday ka dib markii ay la casriyeeyay laftiisa Lugood ay. Waa hagaag, si kastaba ha ahaatee, waxaan u tegayaa inaan kuu sheego in maalmaha welwelo oo ka badan sidii aan u tegayaa inaan idinla wadaago hababka ugu fiican ee dib loo soo celiyo aad maqan maktabadda Lugood inta ugu badan ee suurto gal ahay.
Habka 1: Rescan isticmaalaya TunesGo ka Wondershare
Habka 2: Hel maktabadda Lugood dib ugu celiyey bedelay dhammaan faylasha ay jir
Habka 3: Dib-u-baarista maktabadda si uu u xaliyo metadata ka maqan by dib-u-baar files music oo dhan.
Si aad u bilaabaan kula yeelan doonaan in ay soo baxdo iyo rakibi qalab loo yaqaan TunesGo la yaab leh ka Wondershare on inay your computer. Link download waa sida hoos ku siiyo.
Riix halkan si aad baxdo iyo rakibi TunesGo ka Wondershare on si aad u computer
Haddii aad weli ma updated maktabadda Lugood aad tan iyo markii uu ku daray farabadan ugu dambeeyey ee kuwan raadkaygay song maktabadda Lugood aad oo uu synced aaladaha Apple aad sida iPhone, iPod, iPad iwm la kuwan raadkaygay, kuwaas oo markaas halkii la isticmaalayo habka kale oo kasta, si adag ayaan waxaan soo jeedin lahaa inaad isticmaasho TunesGo ka Wondershare in ay dib u hesho maqan maktabadda Lugood. Waa maxay sababta? Sababtu waxa weeye in maktabadda jir Lugood tan ma updated kuma jirto in aad ugu dambeeyay music, videos iyo barnaamijyadooda, waa in qofku ku daray ka hor inta laga badiyay maktabadda iyo in ay meesha TunesGo Wondershare qalab yimaadaa si aad samatabbixinta sida ay kuu ogolaanaysaa inaad ku wareejiso music, playlists , videos iwm ka macruufka qalabka maktabadda Lugood ah, samaynta maktabadda maqan hal dhamaystiran halkii uun ka soo kabanaya. Geedi socodka ku lug leedahay 3 talaabooyin fudud.
Tallaabo 1: Ku rakib TunesGo on your computer iyo xiriiriyaan macruufka qalab - iPod, iPhone, iPad iwm la your computer iyadoo la isticmaalayo cable USB socon.
Talaabada 2: Hadda, TunesGo waa in lagu ogaado qalab macruufka oo ay muujiyaan in ay suuqa kala weyn. Markaas, guji "Music Transfer 'doorasho ka dooro' dhoofinta in Lugood 'ka' dhoofinta 'badhanka si ay u bilaabaan music dhoofinta ka qalab macruufka maktabadda Lugood ah.
Talaabada 3: Wixii la diyaariyo waxyaabaha soo iibsatay, waxaad u baahan doontaa in aan bilowno Lugood ka dibna riix 'Edit'> 'aad rabtid'. Ka dib markii in, guji tab ee 'Store' iyo hubi ikhtiyaarka for 'Download pre-amar marka la heli karo'.
TunesGo for Windows taageerada dhoofinta of music iyo videos si toos ah maktabadda Lugood si kastaba ha ahaatee TunesGo u Mac kuu ogolaanayaa oo kaliya si aad u dhoofiyaan music maktabadda Lugood waqtiga xaadirka ah. Wixii videos, isticmaali app si ay u dhoofiyaan si aad Mac hore ka dibna dajiyaan maktabadda Lugood aad ka dib.
Talaabada 1: jeelyihiin in ka Lugood, maktabadda ka heli Lugood aad ka dibna u jiidin aad desktop. Meesha xaaladaha inta ugu badan ay noqon doontaa soo socda.
Talaabada 2aad: In 'Lugood Maktabadaha Previous' folder ee folder Lugood, jiidi ku Lugood file ugu dambeeyey oo lagu magacaabay Lugood Library YYYY-MM-DD.itl. Delete taariikhda faylka this. Waxaa nuqul gal ah in Tallaabada 2 halka aad ka heli Library.itl Lugood ah.
Ka dib markii uu bedelay file Lugood Library.itl jabtay oo ka weyn hal, aad haatan ka arki kartaa in aad ka maqan Lugood Library soo laabtay.
Dib-u-cusub Waxaad karo files shaqsi iyaga oo ciyaaraya Lugood. Haddii aad u isticmaashay barnaamijka dibadda in ay bedesho xogta iyo aadan rabin in ay u ciyaaro song kasta si aad u hesho waxa aad u cusboonaysiiso markaa habkan ku tusi doona sida.
Talaabada 2: Riix 'File'> 'dar maktabada "
Talaabada 3: Soo qaado meesha uu maktabadda Lugood aad (ee galka 'Lugood')
Lugood markaa dib-u-dari doonaa dhammaan faylasha aad horey u in aad maktabadda. Lugood ma abuuri doonaa tus. Saas ma aha ee waa dib-u-iskaan doonaa file kasta oo bedeli doona metadata ee entries jira in aad maktabadda.
> Resource > Lugood > Sida loo rescan iyo hagaajin maktabadda Lugood